njani ukubhala a kubekho inkqubela kwindlela engcono, ukuhlangabezana kum. (Intlanganiso)
Ndifuna buza kubekho inkqubela nokuba yena ufuna ukuya kuhlangana kunye nam, ngokuba ndibona kubo ngokwenene kuyanqaphazekaarely, ndifuna ukujonga yakho yokubhala, kodwa njani ndenze okokuba ngaphandle umyalelo kuba ngokubanzi, kodwa nangona kunjalo kakhulu omiselwe. Ndiza kuba ngaphantsi ixabiso kwindlela i – ‘intended’ ngakumbi ingqondo-amandla kwi-niceness, ububele, ukutyala imali. ukususela siyabona ke abancinane, ndandicinga ukuba ngokwam, ndizokubhala ngaba le incinci ileta. Ndinga ngenene kuba ngokoyikekayo ndonwabe Nani amehlo i-umkhenkce cream. Kunjalo, mna mema Kuwe. Ndinga uvuye ngenene enkulu, ukuba uya kuba esithi Ewe. Nceda tsalela kum. Ngaba Amateur. Isiphumo ngu-old-fashioned. Ihlala injalo ngaphandle ukususela ngwevu imilinganiso. Kanjalo, ndandicinga hayi anchatten, kodwa ngokuqinisekileyo ileta. Nge ukhetho ukhetho stationery, khetha kwaye beautiful stamp, Isandla-ebhaliweyo. Akunjalo, kodwa kubalulekile kakuhle. Buza kwabo benza ntoni kwi iiholide okanye ngempelaveki, ngoko ke ucwangciso kwaye ukuba ufuna qho ngemini-nto yenza unako ndimbuza ukuba ngaba ufuna ukwenza into ethile kunye nawe) kunzima, ngenxa yokuba yena sele akukho umnqweno nam ukuya kuhlangana, ngoko ke ndidinga kancinci ka-ekuqinisekiseni ukuba enze. uza kuba ukwenza Okulungileyo apho ucinga ukuba ufuna ukwenza okanye makabe lucky) Akukho unye, mhlawumbi into kwi-kolawulo ‘Heee, ndizakuyenza hamba ngoko ke cinema, ufuna ukuza nam nawe’ uhlobo iimboniselo, ngolohlobo. Ezininzi comment) ndiza sele ukusukela a ezimbalwa kwiiveki kwi kubekho inkqubela. Iklasi ngothando (ndinguye.). Sibhala isibhoso t kunokwenzeka kwaye ndiya bona nabo kakhulu rhoqo esikolweni. Thina hug kuba imali kwaye, rhoqo, encinane incoko uza kuthatha indawo, kodwa oku ngenxa ixesha koxinzelelo, phakathi iiyure hayi nje ixesha elide lahluleka. Ngoku ukuba ufuna wathi kum iintlobo ukuba ufuna into ukususela yakhe kodwa hayi kwi nani, kwaye ndine buza: Kufuneka ndiya kuhlangana nawe. Ukuba impendulo ngu-Ewe, njani, ndiyabuza kwenu, ngalo ndlela, ngoko ke ndiya kunikela ngayo ngoku ixabiso yilento ndikuvayo. Andikakwazi ndine ukuba ukusebenza ngomhla kuwe. Sino ebhalwe phezulu ngoku, i-abancinane, mna ekugqibeleni waphendula. Kufuneka ndibhala ngoku ngokulula re-Ifula, yintoni phezulu. kwaye ukuba uphendula kwaye sifumanisa ukuba kulo incoko, abo ndiya andinaku ukubhala malunga ke, kunye yakhe, ukuba yena ufumana kum boring. Tshini, ndino ezimbalwa ezidlulileyo, ezininzi uqhagamshelane kunye kubekho inkqubela ukusuka lam kulo Nyaka, siza zahlangana kabini, kodwa ngoku mna kuba akukho engakumbi qhagamshelana wakhe. Indlela ayikwazi ndibhala ngoku kwi-best, okanye awuvumelani nesisigqibo, ukuya kuhlangana nani, kusenokwenzeka kwakhona. Ewe ndithanda a kubekho inkqubela kodwa yena ubhala kum kuphela kuyanqaphazekaarely. ukuba mna ukunxibelelana nawe ke siya kubhala i-real izikhundla kwaye ke funny. wena ke kanjalo imibuzo, njalo njalo. kodwa mna uhlobo na ufuna ukuba bhala into ngonaphakade ucinga. Molo. Umhlobo wam wathi ukuba girls wabelane Ngesondo kunye ngamnye ezinye xa baye bahlangana: ukuba ichanekile. Heee guys, ndifuna ukuya kuhlangana kunye nam elandelayo kwiiveki ezimbalwa kunye girls kodwa andazi kanye kanye yintoni esinokuyenza. Sino ezingabonwayo kuba malunga iinyanga, kodwa mna? efana nayo kakhulu, uyakwazi phantse bayibize uthando. Njani ndixelela wakhe ukuba mna uthando yakhe.
Ke funny, andiyazi kakuhle nokuba yena uthanda kum okanye hayi. Yena ubhala kum, naliphi na ityala, kaninzi into efana. Kuba Ulwazi: ndiza a, Heee, Boy ifuna ukuya kuhlangana kunye nam ukubhala kum ukuba bekuya kumenza ndonwabe kakhulu ukuba sithanda kuhlangana, ukubhala kum ku WhatsApp kodwa kakhulu kuyanqaphazekaarely. Ngoko ke, u-kwiiveki ukuwaphula kwaye wathi kwakhona waqala emva umyalezo wam wokugqibela ukufunda, xa ndithe ke emva ukubhalwa emva kokuba sele ukufunda umyalezo wam kwakhona kutshanje. Ngoku, sibhala isibhoso kanjalo scarce, nangona kunjalo, t kunokwenzeka, kodwa nkqu kunjalo ababini i-Snape mini, nangona kunjalo, lowo, Snape, nakuba kunjalo, iselwa rare. Oko kumele ndiya kuthabatha ngayo ngoku. Yena ngoku ifuna kum ngoko ke mhlawumbi a budlelwane okanye hayi. Yakhe Eks girlfriend waba stalking kum kwaye ngoko waba kunzima ukusebenza ngokupheleleyo pissed ngomhla wakhe waza wamxelela wakhe ukuba emke kum yedwa, njalo-njalo. Kuhlangana kum kamsinya nge kubekho inkqubela, kodwa ufuna ukubhala kude kube ngoko, uzole kunye naye. Akunyanzelekanga ukuba ufuna, kunjalo ngoku zonke izihloko anticipated kuba Ntlanganiso. Umntu ke Izimvo. Heym ndinguye ubudala kwaye ukuzithemba kwam kubekho inkqubela. Soloko kokuba iingxaki esikolweni, waba bullied, njalo-njalo. Kuba hardly na izihlobo ngoko ke ayisosine nje kuba girls. Nabani na onayo iincam kwi njani mna kusenokuba kancinci ngakumbi vula ngakulo girls. Ingaba iingcaphephe lula nge abantu kunokuba ukuba bathethe mhlawumbi umntu wam ubudala yam Vala.) LG Justin Kuba ngoku kuba kweenyanga eziliqela, kwaye kubekho inkqubela uqhagamshelane. Sisebenzisa kunye enye club, kodwa izinto Ezahlukeneyo. Khangela kuthi wonke impela-veki. Kodwa ngaba kuyanqaphazekaarely kuba ithuba thetha ngendlela uxolo ezimbini kuthi. Yiyo sifuna ukuya kuhlangana nathi ngoku kwi-iholide kwi-veki. Wena musa care into besiyenza. Ndiqinisekile ukuba ngoku uzama ukuba ingaba yintoni Eyona. Ndiza pretty uqinisekile kum kwaye sele ebhaliweyo ukuze kubekho inkqubela kanjalo. Kwesi sithuba, ndathola yakhe inani kwaye yonke into phezulu. Kuphela kuwe ubhala kum kakhulu kuyanqaphazekaarely, oko kukuthi kanye ngosuku imizuzu okanye ngoko ke, kodwa ngoku yena alifumanisanga ukubhalwa kum imihla. Ndenza njani yenza buyisela ngokukhawuleza. Ndicinga ukuba kubekho inkqubela ingaba ngenene okulungileyo. Nceda ngokukhawuleza impendulo: ukubhala intliziyo nangecawa isixhobo kwaye mna yafumanisa ukuba abayo ngoko ke isiqingatha i-phinda kwaye siya kuhlangana ndingathanda ukuthi oku, ukuze kubekho inkqubela, apho ndicinga ukuba ufumana mnandi kodwa thina? andazi kwethu.
Ndiza Valletta ke ukuba neentloni kwaye mna isithembiso nkxalabo kum. ngoko ke, bazalwana umbuzo uthi njani mna thetha, ukuze kubekho inkqubela njani mna kufuneka ukulawula incoko ngoko ndinako get yakho inani, ingakumbi oko ndinako, ndithi kwi incoko. kwaye nangona mna kuba ngentsasa nge boy kumhla, kulungile, nokuba kuyinto efanelekileyo umhla, andiyazi, nakuba kunjalo, siya kuhlangana ekuseni. Kodwa le Ngxaki ukuze abe ubhala xa lowo ngu-intanethi, kuphela ukuba mna-imeyili kuye. abe ubhala kum kuyanqaphazekaarely, ufuna ukuya kuhlangana kunye nam namhlanje. yintoni intsingiselo eli, ukuze abe ubhala ngoko ke abancinane. Indlela unako mna buza kubekho inkqubela nokuba yena ufuna busuku ukuba beze kum, kwaye iimifanekiso ingaba jonga. Nolu kubekho inkqubela mna anayithathela sele ubhala kuba ngexesha kwaye uthetha nge yakhe kwi-school. Kukho boy, ndiyazi ukuba yena likes kum kodwa ke zonke kukho ngelizwi lakhe icala. Ndiya kumbona ngamanye amaxesha, kodwa ngenene kuyanqaphazekaarely, kwaye ke kuphela kunye nabahlobo. Mna ndimthanda nyani kakhulu kwaye ungathanda ukubhala naye aze kumbona. Kodwa Mna musa ufuna nerve. Sibhala isibhoso kakhulu kuyanqaphazekaarely kwaye ukuba mna-imeyili kuye ngoku, ndenze njani ukusebenza eyona ngaphandle njengoko burdock. Ndingathanda kwakhona uqhagamshelane kunye naye, kwaye ndinoloyiko ukuze abe ayisasebenzi ubhala kum: (ndiyazi okokuba ezi nervous imibuzo, kufuneka kwam, kodwa ngoku ndiza kwi Imeko efana nale, ucelile nokuba ngaba sifuna ukwenza Utshintsho kwixesha elizayo, kwaye sele waphendula kwi-affirmative, kodwa ubhala nam Molo, ngoko ke ndim ubudala kwaye ndiya kuba ngoku zahlangana malunga carnival ngu super pretty kubekho inkqubela (yena ngu). sino ebhaliweyo phambi carnival kunye, ngenxa yokuba ndithethe ukubhalwa ileta nje ngeveki phambi. sino ebhaliweyo ukuba ngamnye ezinye kwaye nathi kuba carnival kwi-ngokuhlwa, e-Iqela ntlanganiso. sino kuhlangatyezwana nazo apho, yangqungqa kananjalo kissed (amaxesha amaninzi). sathi kanjalo bhala kwakhona kunye, kodwa mna anayithathela khetha ka-imibuzo? koyika kuni emva intlanganiso elandelayo, ngoba ndicinga ukuba ngenye indlela ukuba Intrusive jonga okanye njalo. Ndicinga kuba nam yintoni ngokwenene phezulu ukuze kubekho inkqubela kwaye yena ikhangeleka nantoni na kodwa averse kum malunga Njani mna kufuneka abazali bam ndithi, kufuneka Kuhlangana kunye kubekho inkqubela, ndinguye iminyaka engama-kuba zange ndathi oku, ngoba mna ke zange ngenene nge-girls, nam ke iphinde kancinci uncomfortable. Ndiyathemba ungenza kundinceda kancinci
← Dating for umtshato